XOG CUSUB: Dilka General Galaal oo Waji Hor Leh Yeeshay Nin Hotelka Joogay oo Sir Culus Bixiyey. - Banaadisom
Home Wararka Maanta XOG CUSUB: Dilka General Galaal oo Waji Hor Leh Yeeshay Nin Hotelka...
XOG CUSUB: Dilka General Galaal oo Waji Hor Leh Yeeshay Nin Hotelka Joogay oo Sir Culus Bixiyey.
Wuxuu sheegay in Jeneraal ay dishay hal xabbad oo qadaadka dhinaca danbe (Qoorta) looga dhuftay, taasina aysan suuragal ahayn qof dagaalamaya in gadaal laga toogtay, wuxuuna intaas ku daray arrimo shaki badan ku abuuray oo ah xaaladii loogu tagay Qolkii Jeneraalka.
“Jeneraalka wuxuu ku sugnaa barandada qolkiisa, Barandada waxaa loogu tegay oo yaallay meydka Jeneraal Galaal, waxaana kor saarnaa Nin Shabaab oo Bam F1 ah watay, waxaa kaloo meel 1 Mitir u jirta yaallay nin kale oo meyd Alshabaab ah, waxaan aaminsanaa inuusan ninkaasi meeshaas ku dhiman ee la keeenay meesha,” ayuu yiri Jeneraal Indha-cadde oo wareysi siiyey Idaacadda KNN ee Muqdisho.
Wuxu sheegay inuu dilka Jeneraal Galaal ku tuhunsan yahay ciidamada dowladda, taasina uu ku caddeynayo laba sabab. “Jananka iyo ninka Shabaabka ah ee watay bambada qol yar oo 2 Mitir ayey ku wada jireen..waxaa is-weydiin leh sidee dad dagaalamaya hal qof ugu wada dhinteen..?” ayuu yiri Yuusuf Indha-cadde.
Jeneraal Indha-cadde ayaa sheegay in sariirta ninka meydka ah ee Al-Shabaab lasoo dhigay lagu arkay faro dhiig leh oo cuskaday, kuna sawirmay sariirta, wuxuuna ku dooday in labada nin ee meydadka Al-Shabaab lasoo qaaday oo meesha la geeyay oo ah qolka Jeneraal Galaal.
Wuxuu qirtay in maleeshiyada Al-Shabaab markii ay galeen Hotelka ay toos u abaareen qolka uu deganaa Jeneraal Galaal, dagaalka uu dhex maray, wuxuuna intaas ku daray in Jeneraal Galaal uu diyaarsanaa, kuna hubeysnaa qori AK 47 ah iyo bambooyin, uuna aamiinsan yahay inuu raggaas Al-Shabaabka isagu dilay, sida uu yiri.
Isagoo ka hadlayey dagaalkii ay ciidamada dowladda ku galeen Hotelka ayuu caddeeyay in muddo markii aanay wax rasaas ah dhicin, mar kaliya xabado la maqlay, kadibna ciidamadu sheegeen in qofkii u dambeeyay la dilay oo lagu yaacay Hotelka.
Wuxuu Jeneraal Yuusuf Indha-cadde shaki badan ka muujiyey in qorigii Jeneraalka la qaatay iyo in Hotelka oo dhan ay ciidamadu xaalufiyeen wixii qaadmi karay oo dhan ka qaateen, ayna wax lala yaabo ahayd in Kaamerooyinkii ku xirnaa Hotelka la burburiyey oo waxba aan looga tegin.
“Ma dhahayo madaxda dowladda ayaa amartay in la dilo Jeneraal Galaal, laakiin waxaan dalbaneynaa in baaritaan lagu sameeyo sidii ay wax u dhaceen…” ayuu yiri Jeneraal Yuusuf Indha-cadde.